USithebe uzokulwela ukuhlala kwiBafana, ufuna nendebe noSuthu
USiyethemba Sithebe waMaZulu FC, uthi nakanjani ufuna ukuba khona eqenjini leBafana Bafana elizodlala imidlalo yokuhlunga. Ukubheke ngabomvu ukudlala kwiCAF Champions League ngesizini ezayo.
IBafana izodlala imidlalo yokuhlungela iNdebe yoMhlaba ka-2022 eQatar, ngenyanga ezayo. Usuthu lona luzoyibamba kwiChampions League ngesizini ezayo kulandela ukuqeda endaweni yesibili kwilogi yeDStv Premiership.
“Nakanjani ngiye kwiCosafa Cup nginakho emqondweni ukuthi ngifuna ukugcina indawo yami kwiBafana Bafana,” kusho uSithebe. “Sonke nje thina ebesidlala kulo mqhudelwano sidlale kahle futhi ngicabanga ukuthi abaqeqeshi bazoba nenkinga enkulu uma sebekhetha iqembu.”
Lo mdlali ushaye into ecokeme kwiCosafa Cup ka-2021 wagcina eqokwe njengomdlali obaqwaqwade bonke emakhanda ngokudlala kahle.
“Kungijabulise kakhulu ukuwina lo mklomelo kodwa ngingasho nje ukuthi yinto ebengingayilindele. Kuyinto enkulu kakhulu ukubizwa kwiBafana Bafana bese ufike wenze kahle. Ngijabule ngendlela engachazeki,” kusho uSithebe ezwakala ukuthi usese kakhulu.
Uveze ukuthi ufuna ukungabe esasala uma kubizwa abadlali abazoyibamba kwiBafana nokuyinto akholwa ukuthi izomnika amava okudlala ngokukhululeka kwiChampions League.
“Kungisizile ukuba sekhempini yeBafana ngoba kuningi umuntu akufundile. Amazwe ase-Afrika ebesidlala nawo, okubalwa kuwona neSenegal, aqinile kakhulu.
“Onompempe nabo abancengani ngakho kuyajabulisa ukufunda lokhu. UPitso Mosimane uhlale esho ukuthi indlela eya e-Afrika imazombe ngakho kuzongiqinisa ukudlala kwiBafana. Futhi ngikubheke ngabomvu ukuyibamba kwiChampions League,” kusho lo mdlali oyibamba esiswini.
USithebe uthe bazimisele ngokwenza kahle kwiPremiership ngesizini ezayo, kanti nakwiChampions League abayile ukuyojika.
FUNDA NALA: ICeltic iyenqaba ukudayisa uLuthi, yena ubefuna ukuya kwiChiefs
“Njengoba sinomqeqeshi onamava, uBenni McCarthy, nginethemba lokuthi sizohamba ibanga elide kwiChampions League. Ngiyazi ukuthi abantu balindele lukhulu kithi ngesizini ezayo ngoba sidlale kahle kakhulu kule ephelile.
“Sifisa ukuwina indebe eyodwa bese singasheshi siphume emidlalweni yeChampions League. Siyajabula ukuthi sizomela iNingizimu Afrika kwiChampions League. Sizojabulisa abalandeli bethu ngokudlala kulo mqhudelwano,” kuphetha uSithebe.
CAF Champions League, Ezakamuva, iDStv Premiership
Previous Previous post: ICeltic inqwaha noLuthuli obefunwa uthuli yiChiefs neSundowns
Next Next post: LISENETHINI!: i-Al Ahly beyisezingeni eliphezulu kakhulu kuneChiefs